အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းနှုန်းထားများ သင်၏ငွေတောင်းခံလွှာပေါ်တွင်ယခုသိမ်းဆည်းပါ Gadget သတင်း
လွန်ခဲ့သောလများကမိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသူမည်သူမဆိုသည်မိုဘိုင်းနှုန်းထားအနည်းငယ်ကိုရွေးချယ်နိုင်ခဲ့သည်၊ ၎င်းမှာကိစ္စတော်တော်များများနှင့်ဆင်တူပြီးကျွန်ုပ်တို့ငွေအမြောက်အများပေးဆောင်ရသည်။ ကံကောင်းတာကအရာအားလုံးအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတော်တော်များများပြောင်းလဲသွားပြီ။ ဒီနေ့စျေးကွက်ထဲမှာမိုဘိုင်းအော်ပရေတာအမြောက်အမြားရှိနေတယ်၊ ​​အဲဒါကကျွန်တော်တို့ကိုမိုဘိုင်းနှုန်းထားများအမြောက်အများကိုကမ်းလှမ်းထားတယ်။ အချို့သောအလွန်စျေးပေါ, သူတို့အကြားအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောစျေးနှုန်းများနှင့်လည်းကွာခြားချက်ရှိသည်။ ဒီကိစ္စကိုလုပ်ဖို့ငါတို့ကသူတို့အားလုံးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့နှိုင်းယှဉ်မယ်။ တစ်နေရာရာမှစတင်ရန်ခက်ခဲသောကြောင့်ယခုကျွန်ုပ်တို့ငှားရမ်းနိုင်သည့်ထိပ်တန်းနှုန်းထားသုံးခုကိုသုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ကြပါစို့။
စျေးအသက်သာဆုံးခ: € 8 အတွက် Simyo ၏ 5GB
အပြည့်စုံဆုံးနှုန်း: 15GB နှင့်အကန့်အသတ်မရှိသော Virgin Telco ကိုယူရို ၉ ဖြင့်သာပေးရမည်
အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းနှုန်း: ၂၃ ဂစ်ဂါဘိုက်သာယူရို ၁၄.၉၀ ဖြင့်အကန့်အသတ်မရှိကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း
ငါတို့နိုင်ငံတွင် Movistar, Vodafone နှင့် Orange ကဲ့သို့ကြီးမားသောအော်ပရေတာကြီးသုံးခုရှိသေးသည်။ MásMóvil (၎င်းသည်အရေးကြီးသောတိုးတက်မှုအတွက် Yoigo ကိုဝယ်ယူပြီးဖြစ်သည်ကိုသတိရပါ) ကဲ့သို့သောဂန္တ ၀ င်အော်ပရေတာတစ်ခုနှင့်အဝေးကနေ လိုက်၍ လတ်တလော Virgin Telco ကို၎င်းတွင်ထောက်ပံ့ခဲ့သည် အဆိုပါ Euskaltel အုပ်စုအားဖြင့်အမျိုးသားရေးကျူးကျော်။ ထိုပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးစျေးပေါသောနှုန်းထားများကိုပေးသော virtual operator များဟုခေါ်သည်။
Rate သင်၏ကိုယ်ပိုင်နှုန်းကိုဖန်တီးပါ 10GB Simyo 10GB ယူရို ၃.၁၁ / လ
14.95 Amena Rate 20GB နှင့်အကန့်အသတ်မရှိ။ ယူရို ၃.၁၁ / လ
နှုန်း Plus 8GB အကန့်အသတ်မရှိဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့် 8GB ယူရို ၃.၁၁ / လ
La SinFin နှုန်း အကန့်အသတ်မရှိဒေတာနှင့်အကန့်အသတ်မရှိဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ယူရို ၃.၁၁ / လ
ထိပ်ဆုံးလိမ္မော်ရောင်နှုန်းဖြင့်သွားပါ အကန့်အသတ်မဲ့ဒေတာနှင့်အကန့်အသတ်မရှိဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ယူရို ၃.၁၁ / လ
လက်ရှိမိုဘိုင်းနှုန်းထားများ Yoigo ၎င်းတို့သည်စျေးကွက်တွင်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအချို့ဖြစ်ပြီးအဓိကအားဖြင့်သုံးစွဲသူများအားကမ်းလှမ်းသော GB ပမာဏများစွာကြောင့်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများသည်ကွန်ယက်ကွန်ယက်ကိုကြာရှည်စွာရှာဖွေကြသည်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနည်းပါးပြီးလိုအပ်သောအချက်အလက်များကို WhatsApp, Facebook သို့မဟုတ်အင်တာနက်နှင့်အမြဲတမ်းချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သည့်အခြားအပလီကေးရှင်းများတစ်ခုထက်ပိုရန်လိုအပ်သည်။
Yoigo သည်သူတို့၏ဒေတာအစီအစဉ်တွင် megabytes များမကုန်နိူင်သောသုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက်ဤလိုအပ်ချက်ကိုဖမ်းယူနိုင်ခဲ့သည်။ အမှန်စင်စစ်သင်သည်အမှန်ပင်သိ၏ ယင်း၏အကျော်ကြားဆုံးခ: La SinFín။ ဒီနှုန်းမှာသင့်ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းကိုအသုံးပြုရန်အကန့်အသတ်မဲ့ GB ရှိပြီး၊ ထို့အပြင်၊ SinFín de Yoigo သည်တစ်လလျှင် ၃၅ ဒေါ်လာဖြင့်သုံးစွဲရန် gigabytes ပမာဏအမြောက်အမြားပေးသောနှုန်းထားအနည်းငယ်ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏လစဉ်ကြေးကိုလျော့ချခြင်းမှသင်အကျိုးရှိလိုလျှင်သင်လုပ်နိုင်သည် ဒီကနေလုပ်ပါ.
လအနည်းငယ်အတွင်းMásMóvilသည်စျေးကွက်တွင် virtual mobile operator အဖြစ်မပါ ၀ င်ဘဲကုမ္ပဏီတစ်ခုမှထွက်ခွာခဲ့သည် စတုတ္ထစပိန်အော်ပရေတာဖြစ်လာသည်, Yoigo ၏ဝယ်ယူအတူ။
MásMóvil၏စျေးနှုန်းကမ်းလှမ်းချက်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲသည်။ အော်ပရေတာမှစီစဉ်ပြီးသားနှုန်းထားများနှင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည့်နှုန်းထားများ။ MásMóvilကကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းတဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့ ၂ ဂဏန်းပါ။ ပထမသုံးလအတွက် ၈ GB နှင့်အကန့်အသတ်မရှိဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများဖြစ်ပြီး€ ၁၄.၉၀ ဖြင့်အကန့်အသတ်မရှိဖုန်းခေါ်နိုင်သည့် ၂၀GB ဖြစ်သည်။
အကန့်အသတ်မဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများသည်MásMóvil၏ပြုပြင်ပြီးထားသောနှုန်းထားများ၏ဘုံပိုင်းခြေဖြစ်သည်။ အကယ်လို့သင်ဟာသင့်ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းနဲ့စကားပြောတာထက်ပိုပြီး surfing လုပ်တဲ့လူတ ဦး ဖြစ်တယ်ဆိုရင်၊ သင်ရဲ့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုကသင့်ရဲ့နှုန်းကိုတိုင်းတာရန်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်အများဆုံး gigs (20GB) နှင့်တစ်မိနစ်လျှင်0ဆင့်သို့ခေါ်ဆိုမှုများကိုထည့်နိုင်သည်။ ဒီ configuration နဲ့အတူMásMóvilရှိပြီး 8GB နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ယူရိုအနည်းငယ်သက်သာလိမ့်မည်။
လိမ္မော်သီး စျေးကွက်တွင်ဒုတိယမြောက်မိုဘိုင်းအော်ပရေတာအဖြစ်အခွင့်ထူးရရှိရန် Vodafone နှင့်အတူလက်တလောတွင်အပြင်းအထန်ကြိုးစားနေသည်။ ယင်းအတွက်၎င်းသည်မကြာသေးမီအချိန်များ၌၎င်း၏နှုန်းထားများအားလုံးကိုသက်တမ်းတိုးခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်အကျယ်ပြန့်ဆုံးနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးစာရင်းဖြစ်သည်။ ခုနစ်နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာငါတို့ဟာကျော်ကြားတဲ့တိရစ္ဆာန်အခကြေးငွေကိုရှာမရတော့ဘူး၊ နှုန်းထားများသွားပါ.
အရေအတွက်နှင့်အရည်အသွေးအရအများဆုံးတောင်းဆိုသောသုံးစွဲသူများသည်ကံကောင်းစွာရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Go နှုန်းသည်ထိုအချက်များကိုအတိအကျတုန့်ပြန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီသဘောနဲ့လိမ္မော်ရောင်ကနှုန်းထားကိုပေးတယ် အပေါ်သို့တက်။ တက်ပါအချက်အလက်နှစ်မျိုးလုံးတွင်အကန့်အသတ်မရှိသည့်အချက်အလက်တစ်ခုစီ၏ကွာခြားချက်သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသော streaming content များကိုကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း (HD တွင်တစ်ခုနှင့်အခြား 4K သို့ရောက်ရှိနိုင်ခြင်း) နှင့်အကန့်အသတ်မရှိဖုန်းခေါ်ခြင်းများဖြစ်သည်။
သို့သော် gigabytes အမြောက်အများရှိသည့်နှုန်းထားများသည်ပရိသတ်များအားလုံးအတွက်မဟုတ်သကဲ့သို့၎င်းသည် Orange စဉ်းစားထားသည့်အရာလည်းဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ပင်ဖျော်ဖြေမှုနည်းပါးသော Essential Go Go Flexible နှင့်အခြားနှုန်းထားသုံးခုကိုပေးသည်။ Essential နှင့်အတူ Orange သည် 7GB နှင့်တစ်လလျှင်ယူရို ၁၄.၉၅ ဖြင့် ၀ ဆင့်ဆင့်ဖြင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ Orange's Go Flexible နှုန်းထားက ၁၆.၆၇GB နှင့်တစ်လလျှင် ၂၄.၉၅ ကျပ်ဖြင့်အကန့်အသတ်မဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်သည့်အခွင့်အရေးကိုပေးသည်။ နောက်ဆုံးအနေနှင့်ကလေးများနှုန်းသည် ၂.၅ GB အထိတစ်လယူရို ၈.၉၅ ဖြင့်အင်တာနက်ရှိသည်။ ၎င်းသည်သင်၏တက်ဘလက်များနှင့်လက်ပ်တော့များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Go de Orange နှုန်းထားများကိုသင်စိတ်ဝင်စားပါကသင်လုပ်နိုင်သည် အလွယ်တကူဤအရပ်မှသူတို့ကိုငှားရမ်း.
အနီရောင်ကုမ္ပဏီသည်စပိန်ပိုင်နက်အတွင်းရှိကုမ္ပဏီကြီးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်မိုဘိုင်းနှုန်းထားများကိုလည်းပေးသည်။ Orange or Movistar ကဲ့သို့ပင် Vodafone သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအမျိုးမျိုးသောအရည်အသွေးများနှင့်အမျိုးမျိုးသောစျေးနှုန်းများဖြင့်နှုန်းထားအမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။
အနီရောင်ကုမ္ပဏီသည်သုံးစွဲသူများအားလုံးနှင့်အလွန်နီးကပ်သည်။ အများဆုံး megabytes များသုံးစွဲသူများမှမိနစ်အနည်းငယ်သာသုံးစွဲသူများထံမှဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည် Mobile Mini၊ အကန့်အသတ်မရှိ၊ အကန့်အသတ်မရှိ Maxi နှင့်အကန့်အသတ်မရှိစုစုပေါင်း ဒေတာနှင့်အသံမိနစ်ပိုင်းအရများစွာစားသုံးသူများအတွက်။
Vodafone သည်အချက်အလက်အများဆုံးပြောဆိုသောသူများအတွက် 5G နှင့်အကန့်အသတ်မဲ့မိနစ်စုစုပေါင်း GB ကိုအကန့်အသတ်မရှိပေးသည်။ € 47,99 / လအတွက်အားလုံး။ အလယ်အလတ်နှုန်းသည် Unlimited Maxi နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး 4G + ကွန်ယက်တွင်အကန့်အသတ်မရှိ GB နှင့်အကန့်အသတ်မဲ့မိနစ်ဖြစ်သည်။ ဤအရာအလုံးစုံ€ 36,99 / လအတွက်။ နောက်ဆုံးအကန့်အသတ်မဲ့မရှိခြင်းသည် 4G ကွန်ယက် (အမြင့်ဆုံး download speed 2Mbps) နှင့်တစ်လလျှင်ယူရို ၃၂.၉၉ ဖြင့်အကန့်အသတ်မရှိဒေတာများဖြင့်အကန့်အသတ်မရှိဒေတာများပါ ၀ င်သည်။
Vodafone မိုဘိုင်းနှုန်းထားကိုသင်စိတ်ဝင်စားလျှင်၊ သူတို့ကိုဒီကနေ ၃ မိနစ်အောက်မှာငှားလို့ရပါတယ်.
Movistar တယ်လီကွန်းဟောင်းသည်မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းဈေးကွက်၏လွှမ်းမိုးမှုကိုကြီးထွားစေသည်။ နိုင်ငံ၏မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကောင်းမွန်စွာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းကြောင့်၎င်းင်း၏ဖောက်သည်များအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်သူတို့၏စျေးနှုန်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့အများစုလိုချင်သကဲ့သို့မနိမ့်ကျပါ။
ကျန်အော်ပရေတာများအနေနှင့် Movistar သည်၎င်း၏မိုဘိုင်းနှုန်းထားကိုလည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဒီသဘောနဲ့ Movistar က gigabytes အမြောက်အများကိုထုတ်ဖော်ပြသတဲ့နှုန်းသုံးခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပြတယ်။
La Movistar စာချုပ်2နှုန်းထား ၄ င်းကိုအခြေခံကျသောနှုန်းထားအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၄ င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ကိုင်ဖုန်းနှင့် 5GB ကိုခေါ်ယူရန်နှင့်တစ်လလျှင် ၁၅ မိနစ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွက် ၅၀GB ပေးသည်။ Movistar အစုစုတွင်ကျွန်ုပ်တို့တက်ပါကနောက်လာမည့်နှုန်းမှာ XL စာချုပ်ဖြစ်သည်။ လိုင်းဖုန်းများနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများကိုလစဉ်ယူရို ၂၄.၉၅ ဖြင့် ၁၅GB နှင့်အကန့်အသတ်မဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးနှုန်းထားမှာအဆုံးမဲ့စာချုပ်ပါ၊ တစ်လလျှင်ယူရို ၃၉.၉၅ ဖြင့်အကန့်အသတ်မဲ့ GB၊ မိနစ်နှင့် SMS များပါရှိသည်။
ဤစာရင်းမှပျောက်ဆုံးနေနိုင်သောအခြား virtual operator တစ်ခုဖြစ်သည် ဖုန်း ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုစျေးကွက်ထဲမှာရှာတွေ့နိုင်တဲ့ကဏ္ aspects အားလုံးမှာအပြိုင်အဆိုင်အများဆုံးနှုန်းထားတချို့ကိုပေးပါတယ်။ အထူးသကကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်း အလွန်အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်ကြောင်းသုံးနှုန်းထားများ စျေးကွက်၏ကျန်နှင့်ပတ်သက်။ ။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမ ဦး ဆုံးနှုန်းထားကို ၅GB နှင့်တစ်လလျှင်ယူရို ၇.၉၀ ဖြင့်အကန့်အသတ်မရှိဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများပါဝင်သည်။ အလယ်အလတ်နှုန်းထားကတစ်လကိုယူရို ၁၁.၉၀ ဖြင့် ၁၀GB နှင့်အကန့်အသတ်မဲ့မိနစ်များကိုပေးထားသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အမြတ်အများဆုံးနှုန်းကိုတွေ့နိုင်သည်။ ၃၉GB နှင့်တစ်လလျှင်ယူရို ၁၉.၉၀ အတွက်အကန့်အသတ်မဲ့မရှိသောအချိန်။
ဟုတ်ကဲ့သူငယ်ချင်းတို့၊ အာမီနာပြန်လာပြီ စိမ်းလန်းသောအော်ပရေတာသည်ထိုအချိန်ကကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူလိုက်ပါခဲ့ပြီးမိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းနှင့်ဆက်သွယ်ရာတွင်၎င်းသည်ဂန္ထဝင်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ Amena သည် Orange နှင့်ပြန်လည်အသက်ဝင်လာပြီး၎င်း၏နှုန်းထားများသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ ဒီအော်ပရေတာကလိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှုနှင့်ပြောရလျှင်သူတို့နှုန်းထားနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသသည်။ ၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းအစီအစဉ်များသည်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်။ ၎င်းတို့ကိုမိုဘိုင်းဖုန်းအနည်းငယ်သာသုံးစွဲသူများအတွက်နှုန်းတစ်ခု၊ နည်းနည်းပြောသူများအတွက်နောက်တစ်ခုမှာအရာအားလုံးကိုလိုချင်သူများအတွက်နှုန်းဖြစ်သည်။ လေးခုအံ့မခန်းနှုန်းထားများ။
ပထမနှုန်းသည်အိမ်အပြင်ဘက်ရှိဖုန်းကိုမသုံးသောသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ Amena က ၄GB ကိုတစ်မိနစ်လျှင်4ဆင့်နှုန်းဖြင့်ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီးတစ်လလျှင်ယူရို ၆.၉၅ ဖြင့်အကန့်အသတ်မရှိ SMS ပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်၏လက်ကိုင်ဖုန်းမှအနည်းငယ်စကားပြောဆိုပါက ၁၀GB၊ အကန့်အသတ်မဲ့မိနစ်နှင့်အကန့်အသတ်မဲ့ SMS တစ်လလျှင်ယူရို ၉.၉၅ ဖြင့်နှုန်းကိုစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။
အစိမ်းရောင်ကုမ္ပဏီသည် ၂၅GB၊ အကန့်အသတ်မရှိဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့် SMS ကိုတစ်လလျှင်ယူရို ၁၉.၉၅ ဖြင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ သို့သော် 25GB သည်သင်နှင့်မလုံလောက်ပါကနောက်ဆုံးအစီအစဉ်ကသင့်ကို ပို၍ စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးနှုန်းထားကသင့်ကို ၃၀GB၊ အကန့်အသတ်မဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့် SMS ကိုတစ်လလျှင် ၂၄.၉၅ ဒေါ်လာဖြင့်ကျသင့်မည်။
Amena နှုန်းထားကိုရွေးချယ်ရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်ကိုငါတို့သိသည်၊ သင်ဆဲမဆုံးဖြတ်ဘူးဆိုရင်, ဒီ link ထဲမှာသင်ပိုမိုသိရှိလိုပါက.
Simyo လိမ္မော်ရောင်သည်တိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် Orange အုပ်စုပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် Simyo တွင်ရှားပါးပြီးလက်တွေ့ကျသောထူးခြားသောလက္ခဏာရှိသည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်နှုန်းကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ သင်၏အစီအစဉ်ကိုအချက်အလက်နည်းသောသို့မဟုတ်နည်းသောအသံနှင့်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းဖြင့်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ သင်ဘာလိုချင်လဲ။
စိတ်ကြိုက်နှုန်းပြင်ဆင်မှုမည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုမရှင်းပြမီ၊ သင် Simyo သင်ပြင်ဆင်ပြီးသောနှုန်းထားများအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှကျွနု်ပ်တို့တို့သောနှုန်းထားလေးမျိုးဖြင့်ကုမ္ပဏီမှကျွန်ုပ်တို့ကိုတင်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှာခွဲတမ်းမပါပဲနှုန်းထားများရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်တစ်မိနစ်လျှင် ၂ မိနစ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမိနစ် ၂၀ နှင့် ၁၀၀ MB ရှိသည့်အသေးစားနှုန်းထားရှိသည်။ WhatsApp ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွက်မိနစ် ၅၀ နှင့်ယူနစ် ၅.၅ အတွက် 0MB ဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသောနှုန်းထား။ နောက်ဆုံးကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်သည်စကားပြောခြင်းနှင့် surfing လုပ်သူများအတွက်ဖြစ်သည်။ တစ်လကိုယူရို ၉.၅ ဖြင့် ၁၀၀ နှင့် ၁.၇GB ရနိုင်ပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါနှုန်းထားများကသင့်ကိုမအောင်မြင်ပါက၊ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကိုအလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့်ဖန်တီးနိုင်သည်ကိုသတိရပါ။ ပထမဆုံးရွေးချယ်ရမည့်အချက်မှာသင်၏မိုဘိုင်းဖြင့်သွားလာရန်အချက်အလက်ဖြစ်သည်။ သင်ကြည့်ရှုရန်အချက်အလက် ရွေးချယ်၍ မရသော်လည်းအများဆုံး 40GB နောက်ပိုင်းတွင် ၀ မိနစ်မှအကန့်အသတ်မရှိသောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအရေအတွက်ကိုရွေးချယ်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ခံချက်သည်ဤကိစ္စတွင်အလွန်ရှင်းလင်းပါသည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်နှုန်းထားကိုပြုလုပ်ပါ။ ဒေတာနှင့်အသံမိနစ်ပိုင်းများအရသင်သုံးစွဲလိုသောအရာကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင် Simyo ၏အခြားဖြစ်နိုင်ခြေများကိုကြည့်လိုလျှင်၊ ဒီကိုရိုက်ထည့်.
Lowi သည်သုံးစွဲသူများတန်ဖိုးအထားဆုံးသောမိုဘိုင်းဖုန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်၎င်း၏စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းများနှင့်စျေးနှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်အတိုင်းဖန်တီးနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်၏နှုန်းထားကိုသင်၏မိုဘိုင်းပေါ်ရှိ 8GB မှ 30GB အချက်အလက်များကိုရယူပြီးပြုပြင်နိုင်သည်။ အသံမိနစ်အနေဖြင့်၎င်းတို့အားလုံးသည်အကန့်အသတ်မဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများရှိသည်။
အကယ်၍ သူတို့နှုန်းထားတစ်ခုနှင့်အတူနေရန်လိုအပ်ပါက 8GB အတွက်တစ်လလျှင်ယူရို ၇.၉၅ ဖြင့် Yourself နှုန်းထားမှာသေချာသည်။ တစ် ဦး ကစူပါအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းနှင့်လက်တွေ့ unbeatable ။ သင်ဖြစ်နိုင်သမျှ၏ကျန်တွေ့နိုင်ပါသည် ဒီကနေနှုန်းကို settings ကိုနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများ.
သင်မည်သည့်နှုန်းထားဖြင့်လက်ရှိစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပြီးပြီဆိုလျှင်သင်မည်သည့်အရာကိုပြောင်းလဲမည်နည်း။ သင်မြင်သည့်အတိုင်းဖြစ်နိုင်ချေများသည်အဆုံးမဲ့ ဖြစ်၍ အရာအားလုံးသည်သင့်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ငါတို့လစဉ်လတိုင်းကမွမ်းမံသောကြောင့်ဤအခြေနေနှင့်ညှိပြီးမနေပါနှင့်။ ပြီးတော့မင်းရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့နှုန်းကိုဒီနေရာမှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်မင်းကိုအမြဲတမ်းသုံးနိုင်တယ် တယ်လီဖုန်းနှိုင်းယှဉ် roams သင်သိမ်းဆည်းရန်အကောင်းဆုံးသောရွေးစရာကိုရှာဖွေရန်။